एसइइ त खारेज भयाे, ११,१२ र विद्यालय सञ्चालन के हुन्छ? यसाे भन्छन् शिक्षामन्त्री पोखरेल – Jagaran Nepal
एसइइ त खारेज भयाे, ११,१२ र विद्यालय सञ्चालन के हुन्छ? यसाे भन्छन् शिक्षामन्त्री पोखरेल
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ त्यसको आठौं संशोधनपछि यि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले बाधा अडकाउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौं । हामीले कसरी सोचेका छौं भने अब संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कूल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय बितेको छ र अझै आगामी दुईमहिना संक्रमण बढ्दै जाने आँकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन।
त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा हामिले अब हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँ पनि शिक्षाका समितिहरु छन् । अनि फेरी के छ भने हाम्रो ऐनपछि कार्य विस्तृतिकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ मूल्याङ्कनको पनि । त्यो कार्यविधिमा आधारित भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारित गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारिक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । मन्त्रालयले अरु आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउने जिम्मा चाहिं राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई छ ।
त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यस अघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै जारी गर्छ ? कस्तो छ भने समान्यतया दश कक्षाको पढाई पहिलेको एसएलसी, अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गासिएको छ । यहीबाट सेना, प्रहरी, निजामतीका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गासिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन अहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरिदिएको छ । तर अरु उठेका जुन छलफलहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।
हामीले छलफल गरेर जेठ भरिमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौं भनेर लागेका छौं । यो पनि हामीले मन्त्रालयको टोलीले नै वर्कआउट गरेपछि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौं । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौं त्यसले रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरी सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदै पनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला ।
१२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्कोढंगले यसमा सोचिदैन् । ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन् । मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ढिला पनि भएको छैन । परीक्षा गर्दाखेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामुखी भएका छौं । अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामी दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कतिपय सुझावहरुलाई अब यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं अहिले हामीले चाहिं क्याविनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । अब संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गछौं ।
स्कूल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टेन्जेन्सी प्लान) हामी बनाइराखेका छौं प्लान ‘ए’, प्लान ‘बि’, प्लान ‘सी’। दशैं अगाडि हाम्रो करिब ५०/६० दिन चाहिं संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बीचमा खोल्न सक्दैनौं । फेरि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने स्कूल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिका संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु सूचिमा राखेको छ । त्यसैले हाम्रो अन्तिममै खुल्छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ ।
एउटा त मैले जानकारी गराउँछु जुन हामी तयारीको क्रममा नै छौं । अर्कोकुरा हाम्रो एकदेखि नौ सम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो । हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस्, कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पुर्याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि । अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था हो । पुस्तक बाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौं । हामीले मानव स्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ । त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् ।
अहिले स्कूलहरु खोल्ने कसैले आफै निर्णय गर्न पाउँदैन् । कतिपयले मिडियामा मैले सुने १ गतेदेखि स्कूल खोल्दै छन् यो कुरा होइन फेरस हामी भन्दैछौं कि अहिले स्कूलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन। एक गतेदेखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौं ।पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने र अतिरिक्त सामग्री पुर्याउने ।दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दीको बेलामा पनि मधेस तराईमा गरेका थियौं ।
हाम्रो बुझाइमा के छ भने विद्यालय शिक्षामा विशेष गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक चाहिं मूल पक्ष हुन् जसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । स्कुलको समस्या घरसमम जोडने घरको समस्यालाई स्कूलसम्म जोडने हो । त्यसकारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अहिले घरसँग जोड्नुपर्छ यो कुरालाई त्यसो भएको हुनाले हामीले घरलाई शिक्षालय बनाऔं भनेका हौं । त्यहाँ अभिभावकहरु हुनुहुन्छ हाम्रो स्कूलहरु छन् टिचरहरु छन्, लोकल सरकार छ, व्यवस्थापन समिति छ त्यो विद्यार्थीले सिकिराखेको छ कि छैन ? उसलाई के कठिनाइहरु छन् भन्ने कुरा अभिभावक र अरु निकायहरुले मिलेर त्यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
यो दिशामा केहीले काम शुरु पनि गरिसके कतिपय पालिकाले दृष्टान्तपूर्ण ढंगले । मैले नै गाउँपालिका , नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरुसँग, जिल्लाका र प्रदेशका संयोजकहरुसँग कुराकानी गरेको थिए उहाँहरु एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ । अब कोभिडको बेला छ, संक्रमणका घटनाहरु छन्, क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कतिपय ठाउँमा धेरै अप्ठेरो पनि छ । हामीलाई थाहा छ । विद्यालयहरुलाई अप्ठेरो छ, स्थानीय तहलाई अप्ठेरो छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यो पनि व्यवस्थापन गर्दै यो काम पनि हामीले राज्यको कोणबाट हामीले तीन तहको छौं नि त राज्य भनेपछि त । यो काम हामीले गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । फेरी एकपटक आआफ्नो ढंगले कसैले स्कूल खोल्न मिल्दैन । स्कूल खोल्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकन आफैआफैले कसैले गर्न मिल्दैन।
हामीले सामग्री तयार गरिदिएका छौं हामीले लोकललाई पनि दिन चाहन्छौं । यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसकारणले कुनैपनि कुराकानी गर्दाखेरी स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानूनी शासन (रुल फ ल) अन्तर्गत नै सहमति द्वारा नै गर्नुपर्छ । फेरि म अहिले दोहोर्याउँछु की अहिले स्कूल खोल्ने सूचीमा सरकारले राखेको छैन। त्यो चाहिं अलि पछाडिको चरणमा छ । दुई महिना पछाडि फेरि परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै हुन्छ । भौतिक दुरी कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रश्नलाई ध्यान दिने अवब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा, डब्लुएचओले भनेको कुरालाई परिपालना गर्ने गरी समग्र कुरालाई लैजानु पर्दछ । त्यसकारणले यो पक्षलाई ध्यान दिएर जानु पर्छ ।source : janatasamachar